[RASMI] dr.fone - Si fudud ee kaabta & celi KIK CHAT on macruufka ah Devices
dr.fone xidhmo - kaabta macruufka KIK & celi
Samee gurmad ah si aad u ilaaliso CHAT KIK
Kaabta taariikhda chat KIK iyadoo keliya hal click.
Soo Celinta kaliya macluumaadka aad rabto.
Dhoofiyaan wax kasta oo ka gurmad ee daabacaadda ama akhriska.
Gebi amaan, xogta ma laga badiyay.
Waxaan doonayaa in aan sii oo dhan CHAT aan KIK, ma aha oo kaliya kuwa la soo dhaafay!
dr.fone xidhmo - kaabta & celi kaa caawin kara inaad akhriyey oo dhan aad KIK ka hadlida waqti kasta la xadka lahayn macruufka KIK. haddii aad rabto in aad awoodid raad raac aad KIK taariikhda chat maalin kasta. Ka hor inta soo celinta, in aad ku eegaan kartaa file gurmad u eegista iyo soo celin gurmad ay u qalab macruufka. Qof kasta ayaa sidaas samayn kara, dhididka ma.
Kaabta KIK CHAT aad on iPhone, iPad, ama Computer
Waa sida ugu fudud ee socda barnaamijka iyo xira qalab aad. Markaasaa, kaliya riix hal mar si ay u bilaabaan. Inta kale waa automatic.
text oo ku lifaaqan Labadaba waxaa xoojiyaa.
Samee kaabta KIK a wiht 1 Click
Waxaad isticmaali kartaa this gurmad KIK iyo soo celiyo barnaamijka si aad u hesho KIK si fudud u taageeray.
Kaabta Kulanka Xiisaha Leh ee KIK
Waxaad ku eegaan karo oo dhan qoraalka iyo ku lifaaqan ee aad gurmad for KIK.
Soo Celinta kaabta KIK furfurmi
Ka dib eegis, waxaad dooran kartaa in la soo celiyo waxa aad rabto in aad ka gurmad KIK si aad iPhone ama iPad.
Dhoofin Your Content KIK for Daabacaadda
Marka aad rabto in aad ku qor content KIK, aad eegista dhoofin karo content ka gurmad sida file HTML ah daabacaadda.
Tani gurmad KIK iyo soo celiyo barnaamijka si buuxda u akhri-keliya software. Waxaa sii haysan maayo, wax ka beddelo ama daadato xog kasta oo ku saabsan qalab aad ama file ah gurmad. Waxaan qaadan xogta shakhsiga ah iyo warsan dhab ah. Waxaad had iyo jeer tahay qofka keliya waxaa ka heli kartaa.
Soo Celinta KIK ee kaabta Files
Waxaad soo celin karaa files si aad iPhone ama iPad, ama waxaad dooran kartaa in dhoofin content ka gurmad ah in aad computer sida file HTML ah. Ama jidkii aad ku eegaan kartaa faylasha ugu horeysay.
software Tani waa ammaan ah, fudud, oo aan gelin doonaa xogta aad halis ugu.
Your xogta waa mid amaan ah.
Easy si ay u isticmaal
Noocyada Data More
Taageerada nooc xog badan xal kale.
Isku day inaad u free
Top 10 Rooms Chat Free Best KIK iyo KIK Chat Groups
3 Siyaabaha la isu Raadi Hot iyo sexy KIK Girls usernames
Sidee inuu ka soo kabsado Messages tirtiray KIK
Sida loo soo celi Messages KIK ka iPhone
KIK ee kaabta - Sida loo kaabta Messages KIK
Sida lagu Helo Messages Old KIK Back on iPhone
Sidee inuu ka soo kabsado Photos tirtiray KIK From iPhone
Sida loo Arag Messages Old KIK
Users Our Ma Sidoo kale Saarashada:
taariikhda chat LINE si fudud gurmad, oo ay ku jiraan CHAT shakhsiyeed iyo CHAT group, text, cod iyo taariikhda video chat, images iyo stickers, iwm
Kabsado xiriirada lumay ama la tirtiro, fariimaha, sawiro, ama faylasha kale ka taabashada iPhone, iPad, iPod ama.
Dhoofin aad fariimo WhatsApp si aad iPhone, iPad, iPod taabashada, qalab Android, ama computer si ay u abuuraan gurmad ah.